♪ မှားဖျက်မိတဲ့ Data တွေကိုပြန်ယူပေးမယ့် - EaseUS Data Recovery Wizard Technician + Pro v11.8 + Portable + Keygen ♫ ~ ဝင်းကမ္ဘာကျော်
♪ မှားဖျက်မိတဲ့ Data တွေကိုပြန်ယူပေးမယ့် - EaseUS Data Recovery Wizard Technician + Pro v11.8 + Portable + Keygen ♫
Thursday, October 12, 2017 Pyae Phyo (MMiTD) No comments
တင်လိုက်ရတဲ့ Data Recovery တွေဗျာအများကြီးတင်ထားတယ်ဆိုပြီတော့လူတွေတောင် အမြင် ကပ်တော့ မယ်ဗျာ။ ဒါပေမယ့်လည်း Data တွေမဆုံးရှုံးဖူးသေးတဲ့ သူတစ်ယောက်အတွက်ကတော့ ဒီ Software က အပိုတစ်ခုလိုပါဘဲ။ ဆုံးရှုံးဘူးတဲ့သူတွေ ပြန်ပြီး Recovery လုပ်လို့ပြန်ရဖူးသူတွေကတော့ ဒီ Recovery ရဲ့တန်ဖိုးကို နားလည်မှာပါ။ ဒီဆော့စ်ဝဲလေးကတော့ format recovery, unformat, deleted files နှင့် partition loss or damage တို့အပါအ၀င် software crash, virus infection, unexpected shutdown စသည့်တို့မှအကြောင်းအ မျိုးမျိုးကြောင့်ပျက်စီးပျောက်ဆုံးသွားပါကပြန်လည် ရှာဖွေပေးနိုင်သော EaseUS Data Recovery Wizard ဆော့စ်ဝဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ Supported လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ file systems တွေကတော့ FAT12, FAT16, VFAT, FAT32, NTFS/NTFS5, EXT2 and EXT3 တို့ပဲဖြစ် ပါတယ်။ floppy disks, USB flash drives, digital cameras, digital audio players စသည့် external storage မှလည်း Support လုပ်ပေးပါတယ်။ Full Version အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်အောင် Serial Key နဲ့ Keygen နှစ်မျိုးလုံးထည့်ပေးထားပါတယ်ဗျာ။ သူငယ်ချင်းများလိုအပ်မယ်ဆိုရင်တော့ အောက်က Link မှာ ဒေါင်း ယူနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ အားလုံးဘဲအဆင်ပြေကြပါစေနော်။
EaseUS Data Recovery Wizard Technician + Pro 11.8 + Portable x64 + Keygen –Recover deleted data, it was not important this formatting, just deleting, corrupting the hard disk partition and so on, you can download the EaseUS Data Recovery Wizard below. The interface is simple, there is no Russian support, it works with all file systems, there are filters, convenient search, can work with media, there isapreview mode.
• English & German language support.
• Support hard disk up to 8 TB.
• Windows 8.1 compatible – recover any data under Win 8.1.
• Brand-new user interface for more intuitive data recovery process.
• Faster scan lost files by skipping bad sectors automatically.
• Once you have purchased you do not have to download and searchasecond time.
• File recovery after accidental format, even Windows re-installation.